ပြဌာန်းထားသောနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းနှင့်အပြင်များ | Law & More B.V.
ဘ‌‌လော့ခ် » အဆိုပါပြဌာန်းနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီ၏ ins နှင့် outs
အဆိုပါပြဌာန်းနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီ၏ ins နှင့် outs
အဆိုပါပြဌာန်းချက်နှစ်ခုအလွှာကုမ္ပဏီ NV နှင့် BV (အဖြစ်သမဝါယမ) လျှောက်ထားနိုင်အထူးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိသူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဟုမကြာခဏယူဆလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဤသေချာပေါက်အမှုဖြစ်ရန်မလိုအပ်; ဖွဲ့စည်းပုံစစ်အစိုးရကမျှော်လင့်ထားတာထက်စောပြီးသက်ဆိုင်လာနိုင်ပါတယ် ၎င်းကိုရှောင်သင့်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များရှိသလား။ ဤဆောင်းပါးသည်ပြstat္ဌာန်းထားသည့်နှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းနှင့်အပြင်များကိုဆွေးနွေးထားပြီးယင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင့်လျော်စွာအကဲဖြတ်နိုင်စေသည်။
အဆိုပါပြဌာန်း Two- ဆင့်ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်
ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ပြlegal္ဌာန်းထားသည့်နှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေစနစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ရေရှည်တွင်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည့်အများစုရှယ်ယာရှင်များရှိခဲ့ပါက (ပင်စင်ရန်ပုံငွေများအတွက်ပင်) ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ခေတ္တမျှရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် ပို၍ များပြားလာသည်။ ဤအချက်ကပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေး (အောက်တွင် 'GMS') သည်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကြီးကြပ်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခဲ့သည်။ ဤအချက်ကြောင့်ဥပဒေပြုသူအားဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သောအဆင့်နှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီကို ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အထူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သောအလုပ်သမားနှင့်အရင်းအနှီးအကြားမျှတမှုရှိရန်ပိုမိုတင်းကြပ်သောကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကိုရယူသည်။ ဤချိန်ခွင်လျှာကိုကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (နောင်တွင် 'SB') ၏တာ ၀ န်များနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုတင်းကျပ်ခြင်းနှင့် GMS ၏စွမ်းအားကို အသုံးပြု၍ အလုပ်ကောင်စီကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ယနေ့အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်ဤတိုးတက်မှုသည်သက်ဆိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများရှိအစုရှယ်ယာရှင်များ၏အခန်းကဏ္ pass သည် passive ဖြစ်သောကြောင့်အစုရှယ်ယာရှင်အုပ်စုငယ်များသည် GMSs တွင် ဦး ဆောင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်များစွာသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကာလတိုသည်ရှယ်ယာများဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတိုးမြှင့်ရမည့်ကာလတိုအမြင်တစ်ခုကိုအားပေးသည်။ ဤသည်မှာကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားကိုအမြင်ကျဉ်းမြောင်းစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုမ္ပဏီ၏သက်ဆိုင်သူများ (ဥပမာ - ၀ န်ထမ်းများကဲ့သို့) သည်ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်မှအကျိုးရယူသည်။ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေကဤအခြေအနေတွင်ကာလရှည်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ဒါကြောင့်ပြstat္ဌာန်းထားသည့်နှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီသည်ယနေ့အထိအရေးပါသောကုမ္ပဏီပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သက်ဆိုင်သူများ၏အကျိုးစီးပွားမျှတမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အဆိုပါပြဌာန်းချက်နှစ်ဆင့်စည်းမျဉ်းများ (ဒတ်ခ်ျတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာစနစ်သို့မဟုတ် 'structuurrregime' ဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုချက်ချင်းမဖြစ်မနေလုပ်ရမည်။ လျှောက်ထားမှုသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမသင်မနေရမဖြစ်ခင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်များကိုဥပဒေကသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကိုဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၂: ၂၆၃ ('DCC') တွင်ဖော်ပြထားသည် -
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်မြို့တော် ရှင်းလင်းငွေပမာဏအပါအဝင်ငွေလက်ကျန်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောသိုက်နှင့်အတူ အနည်းဆုံး တော်ဝင်အမိန့်မှဆုံးဖြတ်သည့်ပမာဏ (လက်ရှိသတ်မှတ်သည် € 16 သန်း) ။ ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းတွင်ပြန်လည် ၀ ယ်ယူထားသော (သို့သော်ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိသော) အစုရှယ်ယာများနှင့်လျှို့ဝှက်ထားရှိသောအရံများအားလုံးပါဝင်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ, ဒါမှမဟုတ်ယင်း၏မှီခိုကုမ္ပဏီတစ် ဦး တည်ထောင်ခဲ့သည် အလုပ်ကောင်စီ တရားဝင်တာဝန်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံး ၀ န်ထမ်း ၁၀၀ ခန့်အလုပ်ခန့်ထားသည် ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏မှီခိုကုမ္ပဏီအားဖြင့်။ ၀ န်ထမ်းများသည်အမြဲတမ်း (သို့) အချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်တွင်မရှိသောအချက်သည်ဤကိစ္စတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။
ဤအလိုအပ်ချက်များကိုထံမှအရေးကြီးသောအယူအဆဖြစ်ပါတယ် မှီခိုကုမ္ပဏီ။ ဥပမာအားဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းသည့်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်ပြtwo္ဌာန်းထားသည့်နှစ်ဆင့်စည်းမျဉ်းများသည်မိဘကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဟုအထင်မှားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အုပ်စုအတွင်းရှိအခြားကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့သည်မှီခိုနေသောကုမ္ပဏီများအဖြစ် (ဆောင်းပါး ၂၊ ၁၅၂/၂၆၂ DCC အရ) ဖြစ်နိုင်လျှင် -
ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောမှီခိုသောကုမ္ပဏီများအတွက်တစ်ခုတည်းဖြစ်စေ၊ နှင့်၎င်း၏သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အတွက်, subscribed မြို့တော်၏အနည်းဆုံးထက်ဝက်ထည့်ဝင်ပါ,
အဘယ်သူ၏ စီးပွားဖြစ်စီးပွားဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်ထားသည် နှင့်အရာများအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်မှီခိုကုမ္ပဏီ အားလုံးကြွေးမြီများအတွက်တတိယပါတီများဆီသို့ ဦး တည်မိတ်ဖက်အဖြစ်အပြည့်အဝထိုက်သည်.
နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်နိုင်တယ် လျှောက်ထားရန် (အပြည့်အဝသို့မဟုတ်လျှော့ချ) နှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့စနစ် ဆန္ဒအလျောက်။ ထိုကိစ္စတွင်အလုပ်ကောင်စီနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယလိုအပ်ချက်သာအကျုံးဝင်သည်။ စည်းမျဉ်းဥပဒေနှစ်ဆင့်စည်းမျဉ်းများသည်ကုမ္ပဏီ၏အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်နှင့်ချက်ချင်းအကျုံးဝင်သည်။
အဆိုပါပြဌာန်း Two- အဆင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း
အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည်အထက်ဖော်ပြပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက၎င်းသည်တရားဝင်ကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ GMS မှနှစ်စဉ်ငွေစာရင်းများအတည်ပြုပြီးသည့်နောက်နှစ်လအတွင်းဤအရာကိုကုန်သွယ်မှုမှတ်ပုံတင်သို့တင်ပြရမည်။ ဤမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုချန်လှပ်ထားခြင်းသည်စီးပွားရေးပြစ်မှုအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ထို့အပြင်တရား ၀ င်စိတ်ဝင်စားသည့်မည်သည့်ပါတီမဆိုဤမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်တရားရုံးကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်တွင်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ရှိနေပါကဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ထိုအချိန်ကဤစစ်အစိုးရကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အသင်းအဖွဲ့ဆောင်းပါးများကိုပြင်ဆင်ရမည်။ အကြောင်းကြားစာကိုချန်လှပ်ထားသည့်တိုင်သတ်မှတ်ထားသောနှစ်ဆင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအသုံးပြုရန်ကာလသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုလုပ်မချင်းစတင်လည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီသည်အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကြားဖြတ်ခံရမည်။ ထပ်မံလိုက်နာမှုရှိကြောင်းကုမ္ပဏီသို့အကြောင်းကြားသောအခါ၊ အချိန်ကာလသည် (အချိန်ကာလအားမှားယွင်းစွာရပ်တန့်ထားခြင်းမရှိပါက) စတင်ခြင်းမှစတင်သည်။
အပြည့်အဝကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်အခါအသိပေးအကြောင်းကြားရန်တာဝန်မရှိပါ။ အကယ်၍ ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်သည်သက်ဆိုင်ပါက၎င်းသည်ချွတ်ယွင်းနေသောကာလမရှိဘဲဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ အောက်ပါကင်းလွတ်ခွင့်များသည်ဥပဒေမှလာသည်။
ကုမ္ပဏီကတော့ အပြည့်အဝသို့မဟုတ်လျော့ပါးစေသည့်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကျင့်သုံးသောတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏မှီခိုကုမ္ပဏီ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် (လျှော့ချထားသော) နှစ်လွှာဘုတ်အဖွဲ့စနစ်သည်မိဘနှင့်သက်ဆိုင်လျှင်၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်မိဘအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်မရပါကလက်အောက်ခံမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအုပ်စုတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘဏ္companyာရေးကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်ကုမ္ပဏီနှင့်ကုမ္ပဏီအုပ်စုများမှ ၀ န်ထမ်းများသည်နယ်သာလန်ပြင်ပတွင်အများဆုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်မှအပ။
ထုတ်ပေးမြို့တော်အနည်းဆုံးထက်ဝက်သောကုမ္ပဏီ ပါဝင်ခဲ့သည်aဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိအနည်းဆုံးတရားဝင်အဖွဲ့အစည်း ၂ ခု၏ဖက်စပ်လုပ်ငန်း.
SB သည်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များကိုခန့်အပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခြင်းကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအုပ်စုများအတွက်လျော့ပါးစေခြင်းသို့မဟုတ်အားနည်းစေသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာစနစ်လည်းရှိသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာအကြောင်းပြချက်မှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှစ်ဆင့်ပါသောကုမ္ပဏီနှင့်အဖွဲ့အတွင်းရှိစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်မူဝါဒပျက်ပြားခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါကိစ္စများထဲမှတစ်ခုပေါ်ပေါက်လျှင်ဤအချက်သည်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် (၁) ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပါ ၀ င်သောဘုတ်အဖွဲ့ကုမ္ပဏီ (၂) ထုတ်ပေးသည့်အရင်းအနှီး၏အနည်းဆုံးထက်ဝက်ကို (ဒတ်ခ်ျသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြား) မိခင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်မှီခိုကုမ္ပဏီနှင့် (၃) အများစု၏ပိုင်ဆိုင်သည်။ အုပ်စု 's န်ထမ်းများနယ်သာလန်အပြင်ဘက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ပြဌာန်းထားသောနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပေးသောမြို့တော်၏အနည်းဆုံးထက်ဝက်ကိုကုမ္ပဏီနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကုမ္ပဏီများကပိုင်ဆိုင်သည် ဖက်စပ် စီမံချက် (အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်)၊ အများစုမှာသူတို့၏အဖွဲ့အတွင်းရှိ ၀ န်ထမ်းများသည်နယ်သာလန်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ထုတ်ပေးသောအရင်းအနှီး၏အနည်းဆုံးထက်ဝက်ကိုမိခင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ယင်း၏မှီခိုသောကုမ္ပဏီကနှစ် ဦး နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အောက်တွင်ပြitself္ဌာန်းထားသည်။
အချိန်ကာလကုန်ဆုံးသွားသောအခါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုနှစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီပြင်ဆင်ရမည် (NV အတွက် DCC ၏ဆောင်းပါး ၂း၁၅၈-၁၆၄ နှင့်ပုဒ်မ ၂: ၂၆၈-၂: ၂၇၄) အဆိုပါ BV များအတွက် DCC) ။ နှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီသည်ပုံမှန်ကုမ္ပဏီနှင့်အောက်ပါအချက်များနှင့်ကွဲပြားသည်။
အဆိုပါ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း (သို့မဟုတ် DCC ၏ပုဒ်မ ၂း၁၆၄ က / ၂၇၄ ကအရတဆင့်ဘုတ်ဖွဲ့စည်းပုံ) မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်;
အဆိုပါ SB ပိုမိုကျယ်ပြန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုပေးလိမ့်မည် အဆိုပါ GMS ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ။ ဥပမာအားဖြင့် SB သည်အရေးကြီးသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခွင့်ပြုချက်ရလိမ့်မည်။ (အပြည့်အ ၀ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်) ဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ SB အဖွဲ့ဝင်များသည် SBS မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီးလျှင် GMS မှခန့်အပ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်သုံးပုံတစ်ပုံကိုအလုပ်ကောင်စီမှခန့်အပ်သည်။။ ထိုခန့်အပ်မှုကိုထုတ်ပေးထားသည့်အရင်းအနှီး၏အနည်းဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုသည့်အကြွင်းမဲ့အာဏာဖြင့်သာပယ်ချနိုင်သည်။
အသေးစား၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်အမြတ်အစွန်းသက်သက်သာသာရှိသောအစုရှယ်ယာရှင်များ၏စွမ်းအားကိုဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ဖြင့်လျှော့ချနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ SB သည်၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များတိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်ရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏အကျိုးစီးပွားအပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားအတွင်းပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအကျိုးစီးပွားများကိုအာရုံစိုက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ရှယ်ယာရှင်များကိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်အကျိုးပြုခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်လက်တည်ရှိမှုကိုအာရုံစိုက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ကောင်စီသည် SB ၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုခန့်ထားခြင်းကြောင့် ၀ န်ထမ်းများသည်ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒတွင်ပိုမိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
သို့ရာတွင်ကာလတိုရှယ်ယာရှင်များအလေ့အကျင့်နှင့်ကွဲလွဲနေသောအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါကပြဌာန်းထားသောနှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ (ဥပမာမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့) ယခင်ကကုမ္ပဏီ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်ဖြင့်ကုမ္ပဏီကိုကြွယ်ဝစေခဲ့သောအစုရှယ်ယာရှင်များသည်နှစ်လွှာဘုတ်အဖွဲ့စနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုကန့်သတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုလည်းကုမ္ပဏီ၏နိုင်ငံခြားမြို့တော်မှဆွဲဆောင်မှုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြthe္ဌာန်းထားသည့်အဆင့်နှစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီသည်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို အသုံးချ၍ ၎င်းထိန်းချုပ်မှု၏အဝေးဆုံးဖြစ်သောလေ့ကျင့်ခန်း - နှင့် (လျှော့ချထားသောအစိုးရတွင်ပင်) အရေးကြီးသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအားဗီတိုအာဏာသုံးခွင့်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။ ကျန်ရှိသောထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ကန့်ကွက်၏အခွင့်အရေးနှင့်ကြားဖြတ်အစိုးရအတွက်ထုတ်ပယ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေဤအရာ၏အဝါရောင်အရိပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပြဌာန်းထားသောနှစ်ဆင့်စနစ်၏လိုလားမှုသည်ကုမ္ပဏီရှိအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ယဉ်ကျေးမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တစ် ဦး ကချုပ်လုပ်ဖွဲ့စည်းပုံစစ်အစိုးရ
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်များအားဥပဒေ၏အကန့်အသတ်အတွင်း၌နေရာချထားရန်အစီအစဉ်အချို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အသင်းအဖွဲ့၏ဆောင်းပါးများတွင် SB ၏အရေးကြီးသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုကန့်သတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အခြားကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့ (ဥပမာ - GMS) ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုလိုအပ်နိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်အသင်းအဖွဲ့ ၀ င်များပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ပုံမှန်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ အသင်းအဖွဲ့၏ဆောင်းပါးများတွင်သွေဖည်မှုအပြင်စာချုပ်ဆိုင်ရာသွေဖည်မှုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီဥပဒေအရပြnot္ဌာန်းနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မသင့်လျော်ပါ။ တရား ၀ င်ခွင့်ပြုထားသောနှစ်လွှာစည်းမျဉ်းများကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့်လျှောက်ထားမှုရှိသော်ငြားကုမ္ပဏီနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်စစ်အစိုးရသို့နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိသေးသလား၊ သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်အကြံဥာဏ်များလိုချင်ပါသလား။ ဆက်သွယ်ပါ Law & More။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသင့်အားကူညီပေးလိုသည်။
ယခင် Post မှ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းချုပ်နှောင်ထားခြင်း - ဘယ်အချိန်မှာခွင့်ပြုပါသလဲ။
Next Post ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့